मलाई सॉसेज चीज सूपको विधि बताउनुहोस् सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
मेरो परिवारमा, प्रशोधित पनीरको साथ सूप सफल छैन, तर म यसलाई सॉसेज चीजको साथ वास्तवमै मनपराउँछु। म नुस्खा दिन्छु किनकि यो मूल स्रोतमा छापिएको थियो - केही पाक पत्रिकाको प्रकार। मैले भर्खर यसलाई पढें र सम्झें।
ब्रोथको साथ liter लिटरको सॉस प्यानमा 3--6 मध्यम आकारको आलु राख्नुहोस् र १7मिनेटसम्म पकाउनुहोस्। १-२ गाजर र १ प्याज, फ्राई, मोटे खोरमा २०० ग्राम राख्नुहोस्। सॉसेज चीज, सूपमा सबै थप्नुहोस्। अण्डा कुट्नुहोस् र सूपमा थप्नुहोस् र अर्को minutes मिनेट पकाउनुहोस्।
धेरै छिटो र स्वादिष्ट, सामग्रीहरूको साथ तपाईं केही कम, केही बढी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। Bon appetit! !
अवयवहरू: LL ब्रोथ, 3- potatoes आलु, 1 बल्ब र गाजर, सॉसेज (धुम्रपान गरिएको) चीज २०० ग्राम, eggs अण्डाहरू
"पनीरको साथ सॉसेज सूप" (liters लिटर पानीको लागि) नुस्खाका लागि आवश्यक उत्पादनहरू:
२०० ग्राम पकाइएको ससेज,
5 मध्यम आलु,
१ ठूलो प्याज,
2 प्रशोधित पनीर,
सब्जी तेल तलनेको लागि
हरियाली को एक गुच्छा
नुन र मरिच स्वाद गर्न।
चीज संग सॉसेज सूप को लागि नुस्खा।
एक सास प्यानमा पानी उमाल्नुहोस्। ससेजलाई सानो क्युब्समा काट्नुहोस् र प्याजमा फ्राई गर्नुहोस् तरकारी तेल सुनौलो खैरो सम्म उबलते पानी मा, पासा आलु डुबक, grated गाजर, नुन र फोहोर १० मिनेट भन्दा बढी को लागी।
प्याजको साथ सॉसेजलाई ब्रथमा हाल्नुहोस् र अर्को minutes मिनेट को लागी उमाल्नुहोस्। प्रसंस्कृत चीज अनप्याक गर्नुहोस्, चिया चम्मच तिनीहरूलाई सूपको स्लाइसमा डुबाउनुहोस् र पनीर पूर्ण रूपमा विघटन नभएसम्म यसलाई उमाल्नुहोस्।
सेवा दिनु अघि, काटेको जडिबुटीको साथ सॉसेज र चीज सूप छर्कनुहोस्।
PS यस सूपको तयारीको लागि, म सामान्यतया कम फ्याट पकाएको सॉसेज वा प्रीमियम नन-फ्याट सॉसेज प्रयोग गर्दछु। चीज - एक पन्नी प्याकेजमा "मैत्री" वा "अम्बर" प्रकारको सामान्य कच्चा उत्पादन। पनीर (अजमोद, डिल, तुलसी) संग सॉसेज सूपको लागि ताजा वा फ्रिज गरिएको साग लिन सल्लाह दिइन्छ। म कहिलेकाँही यस थालमा सुक्खा पेप्रिका लगाउँदछु, बाँकी मौसममा मिलाएर, यो राम्रो देखिन्छ।
सूपका लागि त्यहाँ विशेष दही छन्, चिन्ता नलिनुहोस्।
होइन, म तपाईं स्वस्थ भएको चाहान्छु)
मलाई यो सूप वास्तवमै मनपर्दछ। तर हालसालै मैले यो पकाएको छैन, किनभने संसाधित पनीर स्वाद गर्न असम्भव भएको छ। र सॉसेज चीज यसको अयोग्यताको कारण खरीद गर्न बन्द भयो। मैले बिभिन्न चीजहरू पकाउन कोशिश गरें - त्यो होइन (सायद मलाई अझै थाहा छैन कुन सूप यस सूपको लागि उपयुक्त छ)। सूपको लागि नुस्खा सॉसेज चीजसँग छैन, यो प्रशोधन गरिएको चीजसँग पकाइएको छ। मसँग केही सूप रेसिपीहरू छन्, तर अण्डाहरूको थप बाहेक।
अंग्रेजी पनीर सूप
चिकन ०.१-११ पीसी
पानी १. L L
सॉसेज चीज (धूम्रपान गरिएको) २००--200०० g
आलु (मध्यम) p- p पीसी
प्याज (ठूलो) १ पीसी
साग (ताजा) १ किरण।
तरकारी तेल (तलनेको लागि)
प्यानमा पानी हाल्नुहोस्, यसमा तयार गरिएको कुखुरा राख्नुहोस् र आगोमा हाल्नुहोस्। पकाइए सम्म कुखुराको फोका।
कुखुरा पकाइरहेको बेला, एक मोटे खोरमा सॉसेज चीज ग्रेट गर्नुहोस्।
प्यालो र आलुको बोक्रा ताछ्नुहोस् र काट्नुहोस्।
कुखुरा पकाएपछि, यसलाई प्यानबाट हटाउनुहोस्, तपाईंले यसलाई सानो क्युब्समा काट्नु पर्छ।
आधा पकाएको सम्म तरकारीको तेलमा प्याज फ्राई गर्नुहोस् (कुनै अधिक प्याकिंग छैन)।
प्याजमा काटिएको कुखुरा राख्नुहोस् र त्यसपछि कुखुराको प्याजमा फ्राई गर्नुहोस् जबसम्म कुखुरा सुनको खैरो हुँदैन।
जब हामी कुखुरा पकाइरहेका थियौं, आलुलाई शूथमा फ्याँकिदेऊ। जब आलु पकाइन्छ, प्याजको साथ फ्राई गरिएको चिकन र ब्रुथमा ग्रेटेड सॉसेज चीज प्रदान गर्नुहोस्।
करीव minutes मिनेट को लागी उमालना र त्यो नै हो, सूप तयार छ। ताजा जडीबुटीहरूले सुप लगाउनुहोस्।
21 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,313 प्रश्नहरू।